०७५ माघ २० गते आईतबार ई. सं. २०१९ फेब्रुअरी ०३ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य – PathivaraOnline
Home > राशिफल > ०७५ माघ २० गते आईतबार ई. सं. २०१९ फेब्रुअरी ०३ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
भोलिको दिनमा तपाई धेरैनै संयमित हुनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यले समेत भोलि साथ नदिने हुँदा खान-पानमा ध्यान दिनु होला। दौडधुप बढ्नाले शारीरिक रुपमा कमजोरी रहनेछ। भोलि आर्थिक रुपमा दिन खासै राम्रो रहेको छैन। उच्च पदाधिकारिसंगको सम्बन्ध बिग्रिनाले प्रतक्ष्य असर दैनिकीमा देखा पर्न सक्ला। तर भोलि विदेश यात्रा भने शुभ रहने देखिन्छ।
भोलि तपाई कानुनी कार्य गर्दा संयम रहनु होला। सरकार विरोधी प्रवृत देखि पनि टाढा रहनु भएकै उचित हुनेछ। काम रोकिनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा मात्रै लाभ मिल्नेछ। भोलि परिवारका सदश्यहरुसंग बहस हुन सक्नेछ। भोलि नकारात्मक सोचहरुले तपाईको मनमा डेरा डेरा बनाउने छन् भने भोलि आत्मबलमा गिरावट आउने हुँदा कार्य सफलतामा कमि आउने देखिन्छ।
भोलिको दिन तपाईको सुख-शान्तिपूर्वक बितेर जाने देखिन्छ। समय आफू अनुकुल हुनाले धेरै काम बन्नेछन्। शुभचिन्तकहरू हरेक स्थितिमा साथ दिनेछन्। परिस्थितिअनुसार निर्णय लिँदा भने परिवारको सहयोग लिनु उचित हुनेछ। भोलि वैदेशिक यात्रा गर्नु हिने हरुको लागि शुभ दिन रहेको छ भने भोलि मिस्ठान्न भोजनका साथै सामाजिक समारोहमा भाग लिने अवसर मिल्ने देखिन्छ ।
भोलिको दिनमा तपाईलाई नसोचेको धन लाभ हुन सक्ला। धेरै समय देखि अड्किरहेको काम भोलिको दिनमा सफल हुनेछ। भोलिको दिन कलाकारहरुको लागि मात्र नभई विद्यार्थीहरुको लागि पनि धेरै शुभ सावित हुन्छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा मिल्नेछ। आत्मविश्वास बढ्नाले छुट्टै पहिचान बन्नेछ। भोलिको दिनमा सजिलै शत्रु पराजित हुन्छन्।
साहित्य-कलामा भोलि तपाईको रुची बढ्नेछ। अध्ययनमा पनि भोलि प्रगति हुने भोलिको दिनमा यात्रा समेत सफल हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले नयाँ योजना मिल्नेछ। निर्धारित कार्यमा सम्पन्न हुनाले राम्रै आर्थिक लाभ दिलाउनेछ। मन पर्ने विशेष उपहार प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धको मामलामा पनि भोलिको दिन शुभ सावित हुनेछ।
शारीरिक र मानसिक रूपबाट भोलि तपाई अस्वस्थ हुनुहुने देखिन्छ। भोलिको दिनमा सकेसम्म यात्रा नगर्नु भएकी उचित हुन सक्ला। भैपरी आउने समस्याले खर्च बढाउन बढाउनेछ। साँझ-पख आर्थिक समस्याले सताउन सक्ला। भोलि बोल्दा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। भोलि सानो कुरालाई लिएर झैँ-झगडा हुन सक्ने हुँदा संयमित रहनु होला। प्रेम सम्बन्ध भोलि बिग्रिन सक्ला।
नयाँ कार्य थालनीको लागि भोलिको दिन धेरै शुभ देखिन्छ। भोलि तपाईको साहित्यिक कार्यहरु प्रति लगाभ मात्र नभई शिप पनि बढेर जानेछ। सृजनात्मक शक्तिमा वृद्धि हुने दिन रहेको छ। भोलि परिवारमा पनि खुशीको माहोल शिर्जना हुँदा मन आनन्दित हुन सक्ला। स्वास्थ्य पनि भोलि सवल नै रहला। अनुभव देखाएर नयाँ काम हातपार्न सफल हुनुहुनेछ।
भोलि परिवारमा कलह बढ्नाले तपाईको दैनिकी प्रतक्ष्य रुपमा प्रभावित हुनेछ। मानसिक रुपबाट तपाईमा उत्साहको कमी हुने भएकोले मनमा अशान्तिको तरङ्ग उत्पन्न गर्नेछ। अचल सम्पतिको खर्च हुदा मन दुखित हुने देखिन्छ । मानहानि नहोस भन्नका निमित्त कम बोल्नुहोला। पारिवारिक वातावरणमा मध्यान्न पछि पनि सुधार हुनेछ। भोलि खर्चमा नियन्त्रण राख्नु होला।
सामाजिक जिम्मेवारी बढ्नाले भोलि सक्रियता बढ्नेछ। आकष्मिक लाभ मिल्नाले मन हल्का भएको महसुस गर्नु हुनेछ भने भोलि नबनेका कार्यहरु सफल हुनेछन। शारीरिक र मानसिक रुपमा मनोबल बढेर जानेछ। भोलि तपाईको हरेक कार्यमा परिवारको साथ र सहयोग बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई राजनीतिक कार्यमा समेत लाभ मिल्न सक्ला। तर भोलि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुँदा जाँगर मारेर जान सक्ला।
अदालती कुनै पनि कार्यमा भोलि तपाई संलग्न नहुनु होला। भोलिको दिनमा तपाईलाई आफ्नै भनिएकाहरुले धोका दिनेछन्। सञ्चित रकम खर्च समेत हुने भोलिको दिनमा घर-जग्गा सम्बन्धि कारोबार नगर्नु भएकै उचित हुनेछ। भोलि तपाईले सवारी देखि पनि संयम हुनु पर्ने देखिन्छ। तर भोलि परोपकारको कार्यले मानसिक रुपमा शान्ति दिलाउनेछ। धर्म-ध्यानमा पनि रुची बढ्न सक्ला।
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सोचेअनुरुप लाभ मिल्ने भोलिको दिनमा तपाईलाई परिवारबाट समेत उचित सहयोग मिल्नेछ। नचिनेको व्यक्तिहरुले समेत भोलि तपाईलाई सहयोग मिल्न सक्ला। बिहान आर्थिक रुपमा पनि समय राम्रो बित्नेछ। तर मध्यान्न पछि पनि समय खराब रहन सक्ला। गोपनियता बहिरिनाले गार्हो पर्नेछ। शत्रुहरु समेत हावी हुँदा काम बिग्रिन सक्ला।
अरुको कमजोरीबाट तपाईलाई लाभ मिल्ने भोलिको दिनमा तपाईलाई हरेक कार्यमा यश, कीर्ति र सफलता मिल्ने देखिन्छ। परिवारमा सामिप्यता बढेर जाने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिने देखिन्छ। भावना र व्यवहार अधिक भावनात्मक हुनाले भने दैनिकीमा केहि असर पार्न सक्ला। भोलि तपाई प्रतिस्पर्धाहरूमा विजयी रहनु हुने दिन परेको छ। सम्पादित कामबाट धन लाभ सजिलै हुनेछ।
विदेशकाे मासिक रू. लाख बढिकाे तलब छाडेर आएका डिल्ली, दीक्षाकै सपनाले नेपालमै यति धेरै सफल… एकपटक हेर्नै पर्ने भिडियो
असोज २२ गते शुक्रबार, हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल…